ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Golden Visa မှနေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်သစ်တွင်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး ပြင်သစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများပြင်သစ်ရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်မှုသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်မှု၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒုတိယနေထိုင်မှု၊ ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်မှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ , ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ၊ ပြင်သစ်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ ပြင်သစ်တွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ပြင်သစ်တွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ပြင်သစ်တွင်ဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်၊ ပြင်သစ်တွင်ဒုတိယမြောက်ဗီဇာအစီအစဉ်၊ နှင့်ပြင်သစ်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ ပြင်သစ်မှရွှေဗီဇာ၊ ပြင်သစ်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ ပြင်သစ်တွင်ရွှေဗီဇာ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 10,000,000
ပြင်သစ်သည်ဥရောပတွင်အချစ်ဆုံးနှင့်သန့်စင်ပြီးဆုံးသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သို့ ၀ င်ရောက်ရန်အံ့ atmosphere ဖွယ်ကောင်းသောလေထု၊ အံ့သြဖွယ်အာဟာရများနှင့်ယဉ်ကျေးမှု။ နေ့တိုင်း Eiffel မျှော်စင်ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ယူရို ၃ ပုလင်းအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရသာရှိသောစပျစ်ရည်ကိုနေ့တိုင်းတွေ့မြင်ရန်အခွင့်အလမ်းမှာလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့်ဤနေရာတွင်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်အလွန်အံ့သြစရာဖြစ်စေသောအကြောင်းပြချက်များစွာမရှိပါ။ ၃၅ နာရီအလုပ်ချိန်သည်ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုထက် ပို၍ ဒဏ္legာရီဆန်သော်လည်း၊ ပြင်သစ်တို့သည်သင့်လျော်သောဘဝနှင့်အလုပ်ချိန်ခွင်လျှာကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်ကိုသဘောပေါက်သည်။ ည ၇ နာရီ၌စျေးဆိုင်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိတ်ထားရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအလုပ်သမားများအားမိသားစုနှင့်အတူညစာစားရန်အိမ်သို့ပြန်သွားရန်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အားသာချက်များ - ယေဘုယျအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းမှပေးသောငွေပမာဏသည်အနီးဆုံး brasserie မှညစာစားသောကူပွန်များဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်အမှန်မှာသင့်ရဲ့အစားအစာနှင့်အတူစပျစ်ရည်တစ်ခွက်ရှိခြင်းနှင့်၎င်းနောက်စီးပွားရေးသို့ပြန်သွားခြင်းတွင်ကြောက်စရာကောင်းသောအရာမရှိပါ။ ပြင်သစ်တို့သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အလုပ်လုပ်ရသောလေ့လာရေးခရီးများရှိပြီးသူတို့အလုပ်စတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်စတင်စုဆောင်းကြသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်လေ့လာရေးခရီးများကိုဂရုပြုကြပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအလုပ်outsideရိယာပြင်ပရှိရက်ပေါင်း ၃၀ ကိုဖြတ်သန်းသွားရသော်လည်းယခုနှစ်မကုန်ဆုံးမီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုကိုခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သြဂုတ်လအတွင်းမည်သည့်နည်းနှင့်ပုံသဏ္orာန်၊ ပုံစံမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်စရာမလိုပါ။ Autoresponder တစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့စတင်ပြီးသင်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းလိမ့်မည်။ အမှန်ဆိုရလျှင်လူတိုင်းသည်ဝေးလံခေါင်သီသောဝေးလံသောဒေသဖြစ်ပြီး Corsica မြောက်ပိုင်းရှိနေကိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြိုခွဲနေသည်။
ညနေ ၆ နာရီနောက်ပိုင်းတွင်ကိုယ်စားလှယ်များအားအလုပ်မက်ဆေ့ခ်ျများအားကြည့်ရှုခြင်းအားတားမြစ်သောပြင်သစ်ဥပဒေက ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအလွန်စွဲလမ်းစေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အမင်းမှားယွင်းစွာဆုံးဖြတ်ခံရချိန်တွင်သင်၏ပြင်သစ်ကြံရာပါများကိုသူတို့၏အလုပ်ချိန်ဇယားပြင်ပ၌လက်လှမ်းမီသင့်ကြောင်းမမျှော်လင့်သင့်ပါ။ ပြင်သစ်လူမျိုးများသည်အဝေးမှထွက်ခွာခြင်း၊ ရေကူးခြင်းသို့မဟုတ်အခြေခံအားဖြင့်ပွင့်လင်းသောနိုင်ငံတွင်ထွက်ခွာသွားခြင်းအတွက်၎င်းတို့၏စွမ်းအင်ကိုပြင်ပတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ နှစ်စဉ်ယူရို ၁၈၁ (၂၂၅ ဒေါ်လာ) သာရပြီး BA သို့မဟုတ် BS ရပြီးနှစ်စဉ်ယူရို ၂၅၀ (၃၁၀ ဒေါ်လာ) အတွက်ဘွဲ့လွန်စာမေးပွဲများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းကျောင်းများသည်နှစ်စဉ်ပညာရေးကုန်ကျစရိတ်ယူရို ၅၉၆ နှင့် Ph.D ဘွဲ့ကိုရယူနိုင်သော smidgen ပိုမိုစျေးကြီးသည်။ ပြင်သစ်တွင်လေ့လာမှုတိုင်းအတွက်သင့်အတွက်ယူရို ၃၈၀ ကုန်ကျမည်။ ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များ (ဥပဒေနှင့်လက်တွေ့ကျောင်းများဟုထင်သည်) သည် ပိုမို၍ ကုန်ကျသော်လည်းနှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်မှာယူရို ၃.၀၀၀ မှယူရို ၁၀,၀၀၀ အထိရှိသည်။
ထို့အပြင်သင်၏နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုဖုံးကွယ်ရန်သင့်အားကူညီရန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောခွဲစိတ်မှုခံယူသူများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေများစွာရှိသည်။ ရေကြောင်းသွားစရာမလိုဘဲ၊ သင်ဟာပြင်သစ်မှာအချိန်အတော်ကြာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတော်များများကိုရရှိနိုင်တယ်၊ လစဉ်လတိုင်းယူရို ၇၀၀ မှ ၈၀၀ အထိအကုန်အကျခံပါတယ်။
Cote d'Azur (ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လူကြိုက်များသောသူနှင့်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ခြင်း) သည်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသရှိနေများသည်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုနေကို အသုံးချ၍ အလွန်မြတ်နိုးသည်။ အမှန်မှာ၊ ဤတွင်ပူနွေးသောရေသည်ဓာတ်ပုံများတွင်သင်တွေ့ရသောတူညီသည့်အရောင်အဆင်းဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ထပ်မံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဤနွေ ဦး နှောင်းပိုင်း Corsica ကို နှိပ်၍ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးသောတောင်တန်းများကိုဘုတ်အဖွဲ့တစ်လျှောက်ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်သည်။ ဒီမှာပင်လယ်ကမ်းခြေပြင်သစ် Reverie ထက်ဝေးသာ။ ကောင်း၏ဖြစ်ကြပြီးငါအကောင်းဆုံးပွင့်လင်း - လေတွေ့ဆုံမှုများအတွက်ကျွန်းတစ်ဝှမ်းလွှဲအောင်လုပ်ဖို့အကြံပြုအပ်ပါသည်! ဥရောပရှိအကြီးမားဆုံးသဲခုံ - Dune of Pilat သည်ဘော်ဒိုးနှင့် ၆၀ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။ အေးခဲနေသောထုများ - မှန်ပါသည်၊ ပြင်သစ်တွင် ၇ ခုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ လေ့လာရေးခရီးအပေါ်တက်ကြွဖြစ်ခြင်းကိုချစ်? Gorges du Tarn တွင်ရေကူးခြင်းသို့မဟုတ် Gorges du Verdon တဝိုက်တက်ခြင်း - ဥရောပ၏ချစ်စရာအကောင်းဆုံး gully ပုံရသည်။
များပြားလှသောကလေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကြိုတင်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနများသည်အများပြည်သူအာဏာပိုင်များကလုံးဝဖုံးအုပ်ထားသည်။ အိမ်တွင်းကလေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ထူးကဲသောသင့်လျော်မှုများနှင့်ကလေးတစ် ဦး ထက် ပို၍ ရရှိခြင်းအတွက်ထူးခြားသောအားသာချက်များရှိသည် - အပိုဆောင်းငွေများမှသည်အကဲဖြတ်ချက်များနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သိသိသာသာကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ အမျိုးသမီးများအားမီးဖွားခွင့်နှင့်လေးလခန့်လျော်ကြေးပေးရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ ထိုနည်းတူစွာဖခင်များသည် ၁၁ ရက်တာကာလအတွက်လစာမလုံလောက်မှုဖြင့်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းခွင့်ပြုနိုင်သည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာသည်ကလေးငယ်ကိုသင်ပွေ့ဖက်လိုသည့်အချိန်တွင်သင့်အား€ 11 1 အထိပေးဆောင်သည်။ အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေနှင့်သင်၌ပြင်းထန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ရှိသည် - အလုပ်သွားရန်နှင့်တစ်လမှယူရို ၁.၅၀၀ မှ ၂.၀၀၀ အထိယူဆောင်လာရန်သို့မဟုတ်အိမ်တွင်ရှိနေရန်၊ သင့်ကလေးများအားအသက် ၂၀ မပြည့်မှီအထိဖျက်ဆီး။ ၎င်းအတွက်ယူရို ၁.၂၀၀ ၀ န်းကျင်ရနိုင်သည်။ ယခုတွင်အချင်းမိန်းမတို့၊
ပြင်သစ်လူနေအိမ်ကဒ် Carte Vitale နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ သင့်အားပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ဆေးဝါးများ၊ ကျိုးနွံသော (သို့မဟုတ်အခမဲ့) ဆရာဝန်အကြံပြုထားသောဆေးဝါးများနှင့်သင်တစ်လချင်းစီသင်အခမဲ့လိုအပ်သောဆေးစစ်ဆေးမှုများကိုစကြ ၀ intoာသို့ဖြတ်သွားသည်။ လစဉ်လတိုင်းသင့်လျော်ကြေးငွေမှအဆင့်အတန်းကိုကောက်ယူပြီးသင်၏ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်သို့သင်ဘာမျှမသွားရန်ရည်မှန်းချက်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့သည်။ သင်ဆေးရုံတက်ရမည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုတွင်သင်ပေးဆောင်ရမည့်မျှော်လင့်ထားသည့်အဓိကအခကြေးငွေမှာနေ့စဉ် ၁၈ ယူရိုဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်ဗီဇာ / ယာယီနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်သည် ၂ နှစ်သက်တမ်း (သက်တမ်းတိုး)
ပြင်သစ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
ဘာကြောင့်ပြင်သစ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက Residency ကိုသွားရမလဲ
ပြင်သစ်၏ရွှေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်သည်အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ယက်ရှိသူများကိုရည်ရွယ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်နှင့်သင့်မိသားစုသည်ပြင်သစ်နှင့်ညီမျှသော ၁၀ နှစ်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Schengen ရိယာ၌သင်သည်အခမဲ့အရည်အသွေးမြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပညာရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်အပြည့်အ ၀ ဝင်ခွင့်ဗီဇာများကိုတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ၂ လသာဖြစ်ပြီး၊ လိုအပ်ပါကမည်သည့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံ၊ ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်သည်၊ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များမလိုအပ်ပါ။
Residency ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
လျှောက်လွှာသည် ၂ လသာကြာပြီးနောက်သင်နှင့်သင်၏ဆွေမျိုးများက ၁၀ နှစ်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုရရှိသည်။ သင့်တွင်ယခင်ခေါင်းဆောင်မှုအတွေ့အကြုံများ၊ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုများ (သို့) ပြင်သစ်တွင်ယခင်နေရာများမရှိပါ။ ခွင့်ပြုချက်ရပြီးလျှင်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုသူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဖြစ်စေ၊ အာဏာပိုင်များကအတည်ပြုထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။
၀ င်ရောက်သူများသည်ပြင်သစ်ရှိစက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်အနည်းဆုံးယူရို ၁၀ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည် သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာအနည်းဆုံး ၃၀% ပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီမှတဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ မိသားစု ၀ င်များကိုဆွဲဆောင်ရန်နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလိုအပ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ကိုရယူခြင်းသည်သင်သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားအခွန်ခံတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်ဟုအလိုအလျောက်မဆိုလိုပါ။ အကယ်၍ သင်၏အချိန်အများစုကိုပြင်ပမှထွက်လျှင်၊ သင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေသည်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိနေပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံရှိသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှရရှိသောအမြတ်အစွန်းကိုသာသုံးစွဲလိမ့်မည်။
ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ပြင်သစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ပြင်သစ်အဘို့ ပြင်သစ်မှဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုပြင်သစ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ ပြင်သစ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံတွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပြင်သစ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ပြင်သစ်မှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သက်သက်သာသာသို့မဟုတ်ပြင်သစ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ပြင်သစ်မှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ပြင်သစ်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ပြင်သစ်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ပြင်သစ်အဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ပြင်သစ်အတွက်, ပြင်သစ်အတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, ပြင်သစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်ပြင်သစ်အတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ ခုသို့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုပြင်သစ်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်း။
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှစီးပွားရေး ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်မှပြင်သစ်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ခြင်း။
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အညီထောက်ခံမှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးပြင်သစ်ရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိနေသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ပြင်သစ် Residency
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်ပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ပြင်သစ်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်ကန ဦး Due Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
ပြင်သစ်ရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားပြင်သစ်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများက Residency ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပြင်သစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပြင်သစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ပြင်သစ်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်သစ်သို့ဖြစ်စေ၊ ပြင်သစ်သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပြင်သစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ပြင်သစ်အဘို့ ပြင်သစ်ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပြင်သစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ပြင်သစ်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ပြင်သစ်တွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့တွင်ရောင်းဝယ်မှုပြုသည့်ပြင်သစ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ပြင်သစ်ကိုအထောက်အပံ့မရရှိနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ပြင်သစ်အဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ပြင်သစ်အဘို့ ပြင်သစ်ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ပြင်သစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ပြင်သစ်အတွက်ရှေ့ရပျ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများကိုစီးပွားရေးမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ပြင်သစ်နှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ပြင်သစ်အာဏာပိုင်များကငြင်းပယ်မှုအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ နေထိုင်ခွင့် ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
International Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ပြင်သစ်၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ပြင်သစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေသော France မှ dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်ပြင်သစ်အတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များသည်အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏ Residency France မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ပြင်သစ်အတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့များအတွက်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးပြင်သစ်အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကူညီသည်။
အကယ်၍ သင်၏ Residency ပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်များအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ပြင်သစ်အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ပြင်သစ်အဘို့
ကျနော်တို့ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်ပြင်သစ်တွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်သစ်အတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ ပြင်သစ်၌တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းမှ Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ဤသည်ကိုပြင်သစ်အတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့အားပြင်သစ်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည့်ဆိုင်ဖွင့်ပေးသည်။
ပြင်သစ်အတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ပြင်သစ်နှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ Residency ကိုကျော်လွန်သောလမ်းကိုထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ပြင်သစ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ပြင်သစ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ပြင်သစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ပြင်သစ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ပြင်သစ်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်လည်းရှိတယ်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်တွေလည်းကူညီနိုင်တယ်။
Incase သင်အဘို့, ပြင်သစ်တွင်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ပြင်သစ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ပြင်သစ်တွင်ရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သငျသညျဖို့စီစဉ်ထားလျှင်ပြင်သစ် ပြင်သစ်ရှိလက်ရှိစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ပြင်သစ်တွင်လက်ငင်းစတင်ဘို့။
ပြင်သစ်ရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ပြင်သစ်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ပြင်သစ်တွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ပြင်သစ်အတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ပြင်သစ်များအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ပြင်သစ်အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ပြင်သစ်၌ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ပြင်သစ်တွင် setup ကိုစီးပွားရေး
Residency ပြီးနောက်ပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပြင်သစ်.
အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်
ပြင်သစ်တွင် Web ဒီဇိုင်း
ပြင်သစ်တွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ပြင်သစ်တွင် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ပြင်သစ်တွင် App Development
ပြင်သစ်တွင် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပြင်သစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ပြင်သစ်တွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ပြင်သစ်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့၏ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency ကသင်၏ကိုယ်စားတရားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ပြင်သစ်အတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ပြင်သစ်သို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ရှေ့နေအားပြင်သစ်ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ပြင်သစ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပယ်နယ်လ်သို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ပြင်သစ်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှနေထိုင်ခွင့်
ပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုပြင်သစ်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုပြင်သစ်သို့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ပြင်သစ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ပြင်သစ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ပြင်သစ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှထောက်ပံ့ခြင်း ပြင်သစ်မှာ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပြင်သစ်နိုင်ငံစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြင်သစ်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက်ထားပါ။ ) အကောင်းဆုံးမှာပြင်သစ်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်ပြင်သစ်တွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ပြင်သစ်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ပြင်သစ်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ပြင်သစ်တွင်စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ပြင်သစ်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုပြင်သစ်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံသို့လျှောက်ထားသည်။ ပြင်သစ်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယပတ်စ်ပို့ရှေ့နေများနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ပြင်သစ်တွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပြင်သစ်ရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
ပြင်သစ်တွင်ရှိသောရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ပြင်သစ်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်းဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပြင်သစ်သို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ပြင်သစ်အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ပြင်သစ်တွင်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ပြင်သစ်အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ပြင်သစ်တွင်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပြင်သစ်ရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ပြင်သစ်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ပြင်သစ်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ပြင်သစ်တွင်ရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ပြင်သစ်တွင်ရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ပြင်သစ်တွင်ရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
Residency အတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် EUR 10,000,000 ဖြစ်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပြင်သစ်မှကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ပြင်သစ်မှအေးဂျင့်များသည် Residency ကိုပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။
Residency သည်ပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်သည်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်သည်။ Residency သည်ပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခကိုသာပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနိုင်ငံသားများအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Residency၊ အာဖရိကမှပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ ဥရောပမှပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ တောင်အမေရိကမှပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Residency၊ မလေးရှားမှပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှပြင်သစ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ သီရိလင်္ကာမှပြင်သစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှပြင်သစ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှပြင်သစ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ယူအေအီးမှပြင်သစ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ပြင်သစ်အဘို့
ပြင်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂြိုဟ်ကို ပြန်၍ ကောင်းမွန်စေပါ
DIRECCTE (စီးပွားရေး၊ ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ စားသုံးမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု)
အလုပ်သမား ၀ န်ကြီးဌာန
link ကိုမှ ပြင်သစ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ပြင်သစ်တွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်